Home News Waa maxay Nuruxka warmurtiyeedka ka soo baxay Shirka Baydhabo? Maxaadan ogaynin?
Waa maxay Nuruxka warmurtiyeedka ka soo baxay Shirka Baydhabo? Maxaadan ogaynin?
Waxaa maanta ka soo baxay shirkii dowlad goboleedyadda maalmahan uga socday Magaalada Baydhabo warmurtiyeed siyaasadeysan. Warmiyeedkaan ayaa waxaa uu yahay midkii ugu adkaa oo ay soo saaraan hogaanka dowlad goboleedyadda.
Inkastoo qodobo badan ka soo baxeeen hadana waxa ugu muhimsanaa sida qeexan oo ay hogaanka dowlad goboleedyada u cadeeyeen in ayan la shaqayn karin dowladda Xassan Cali Kheyre oo lumisay kalsoonidii wada shaqeeyta.
Inkastoo luuqada uu ku qornaa warmurtiyeedku ahayd mid jilicsan hadana waxaa ay gudbinaysay fartiimo ku wajahan beesha caalamka iyo dowlad Federaalka Soomaaliya: Waxaana tusaale looga soo qaadan karaa qorobadaan:
Wixii hadda ka danbeeya beesha caalamka waa in ay toos ula dhaqantaa dowlad goboleedyadda, taas oo macnaheedu yahay in wixii dhaqaale la siinayo dowladda dhexe lagala tashado dowlad goboleedyadda amaba ayaga toos loo siiyo
Dhamaan arimaha amniga, dastuurka, siyaasadda arimaha dibadda waxaa taladeeda iska leh dowlad goboleedyadda.
Dagaal kastaa ee dhan ka ah dowlad goboleedyadda waxaa mas’uuliyadeeda qaadayo Farmaajo iyo kooxdiisa
Waxaa laga qaaday dowlad dhaxe awoodii ay ku ceyrin kartay madaxda dowlad goboleedyadda. Tusaale hadiii la isku dayo in lala dagaalo madaxweyne ka mida dowlad goboleedyadda waxa ay ka dhigantahay iyaga oo dhamaant dowlad goboleedyadda lala dagaalay. Qofkii cusub ee la Keenana ama lagu badali madaxda hadda jirtaa lama aqoonsan doono.
Talaabo kastaa oo ay dowlada dhexe Qaado oo ay u arkaan in ay ka horimaanayso danaha dalka si wadajir ah ayaa dowlad goboleedyada uga soo wada horjeesan doonaan
Dowlad imaaraadka iyo Sacuudiga waa saaxibadda Soomaaliya dowlad dhexana ma jari karto xiriirkaas taariikhiqa ah. Taas oo macnaheedu tahay in dowlad goboleedyada dar-dar galin doonaan xiriirka kala dhaxeeyo dowladaha imaaraadka iyo Sacuudiga.
Madaama dowlada dhexe ku fashilantay amniga qaranka, waxaa maamulka amiga qaranka taladeeda la wareegayo dowlad goboleedyadda
Qodobadaas kor qoran ayaa ah Nuxurka warmurtiyeedka maanta ka soo baxay baydhabo. Waxaana muuqato in dagaal hor leh uu ka dhex bilaawday dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda. Hadii aan isbadal la taaban karo aanu ka imaan dhanka dowladda dhex waxaan shaki ku jirin in dowladda dhexe bur-bur ku imaan doono. Su’aasha beesha caalamka is waydiinayak shirka baydhabo ka dib ayaa ah; Farmaajo Ma la imaankaraa talo cusub oo uga faa’iidaysto fursadda ka dhalan karto kulanka Baydhabo, taas oo macnaheedu yahay madaama dowlad goboleedyada sheegeen in ayan la shaqayn karin RW Kheyre, ma la imaan karaa geesinimo uu isbadal ugu sameeyo hogaanka dowladiisa si kalsoonidii dowlad gobleedlyadda dib loogu soo celiyo.